Ra’iisulwasaarihii Hore Ee Algeria Iyo 4 Wasiir oo Xabsi Lagu Xukumay. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
Ra’iisulwasaarihii Hore Ee Algeria Iyo 4 Wasiir oo Xabsi Lagu Xukumay. (Warbixin)
December 10, 2019 4:09 pm by admin Views: 52
Maanta, oo Talaado ahayd, garsoorka Algeria ayaa soo saaray xukunno ka dhan ah ragga ka soo baxay nidaamkii Boutefliqa, oo ay ku jiraan ra’iisul-wasaarayaal iyo wasiirro.
Garsooraha maxkamadda, “Siidi Maxamed” oo ku sugan caasimadda, ayaa soo saaray go’aanno uu 15 iyo 12 sano oo xabsi ah uu ku xukumay Ra’iisul wasaarihii hore, Axmad Ouyahia, iyo Cabdil Malik Sallal, ka dib markii lagu helay kiisas Musuqmaasuq ah.
Maxkamaddu waxay ku xukuntay Ouyahia 15 sano oo xarig ah. Waxay kaloo xukun 12 sano oo xabsi ah ku riday Sallal kaasoo hogaaminayay dowlada intii u dhaxeysay 2012 iyo 2017, ka dib markii xeer ilaaliyuhu codsaday in 20 sano lagu xukumo midkastoo kamid ah.
Maxkamaddu waxay sidoo kale soo saartay xukun 20 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay Cabdisalaam Bouchourb, wasiirkii hore ee Warshadaha oo kaalin ka qaatay arrimo musuqa la xiriira.
Maxkamaddu waxay sidoo kale riday 10 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay wasiirradii hore ee warshadaha Yuusuf iyo Mahgoub Bida, halka wasiirkii hore ee gaadiidka, maamulaha ololaha Butufliqa, Cabdulqani Salaan, la siidaayay.
Waxay kaloo soo saartay xukun xabsi ah oo ku siman muddo 5 sano, xukunkaas oo lagu riday Wasiirkii hore ee Dalxiiska, Yamina Zerhouni, iyo 3 sano oo isna lagu xukumay Fares Sallal, oo ah wiilkii Raiisul Wasaarihii hore.
Maxkamaddu waxay soo saartay xukun xabsi oo u dhexeeya 3 iyo 7 sano oo lagu soo oogay afar ka mid ah ganacsatada ugu caansan dacwadda, waxayna yihiin Cali Haddad oo horay u ahaa madaxa ururka ‘The Chief of Organisation of Institutions’ (ururka ganacsiga ugu weyn ee Bouteflika xilligiisii) isagoo 7 sano jir ah, Ahmed Mazouz oo lagu xukumay 7 sano, Maxamad Bayri oo 3 sano loo jaray, iyo Xassan Arabawi min 6 sani ah.
Eedaysanayaashu waxay wajahayaan dacwooyin culus: ku xadgudubka hanti sharci darro ah, luminta lacagta dadweynaha, bixinta faa’iidooyinka aan u qalmin, laaluushka, yo maalgelinta qarsoon ee Butufliqa iyo ololaha doorashada xisbiyada.
Dalkaas ayaa waxaa lagu wadaa iney mar dhow doorasho ka billaabato. Waxaana jirta in dadku ay aad u hadal hayaan xukunnadan.
Abdelmalek Sallal, ra’iisul wasaarihii hore ee Algeria ayaa dafiray dambiyada lagu soo eedeeyay, isaga oo yiri “ma xadin hal france” wuxuuna xusay inuu muddo 46 sano ah usoo shaqeynayay si daacadnimo ah.
Dowladaha Afrikaanta ayaa waxaa ku badan musuqmaasuqa waxaana ugu wacan iyagoo wajahaya fara galin uga imanaysa reer galbeedka.
Dowladda Federalka ee Soomaaliya ayaa heer sare ka gaartay musuqmaasuqa, waxaana warbixino marar badan lasoo saaray lagu sheegay iney dowladda koowaad tahay, iyana wey ku qanacday.